Google Earth; fanampiana an-tsary ho an'ireo mpaka sary - Geofumadas
May, 2011 Cartografia, Fampianarana CAD / GIS, Google Earth / Maps, samy hafa GIS
Google Earth, ankoatry ny maha-fitaovana fialamboly ho an'ny olon-drehetra, dia nanjary fanohanana ara-maso ihany koa amin'ny karajia, ny roa hampiseho ny vokatra ary hanamarina fa ny asa izay vita dia tsy miova; Tsy lazaina ho fitaovana fampianarana pedagojika ho an'ny jeografia na kilasin'ny geodesy.
Amin'ity tranga ity dia hanampy an'i Manifold GIS hanangana quadrants sy Google Earth aho hanamarina ny valiny, manararaotra fanatanjahan-tena izay novolavolainay niaraka tamin'i Cristian Mejía, mpandrefy tany Sucre izay nanampy ny fanatanterahana izany traikefa izany. Raha ny tokony ho izy dia mila faritantsika ny faritra hiasantsika, raha ny raharaha Bolivia dia eo anelanelan'ny faritra 19, 20 ary 21 izany; ary ny latitude 8 sy 24 degre, amin'ny hemisphere atsimo. Izany rehetra izany dia azo sintonina avy amin'ny Google Earth amin'ny fizahana tsotra, manova ny safidy mba hahita izany ao amin'ny UTM mba hampisehoana ireo faritra sy ny geografika mba hahitana ireo latitudes sy longitudes.
1. Ny quadrant amin'ireo faritra telo mahaliana.
Ao amin'ny Manifold dia vita Hijery> takelaka
Avy eo izahay dia manondro fa manantena quadrant iray izay miala amin'ny longitude -54 ka hatramin'ny -72, dia ratsy izy ireo satria any amin'ny hemisphere andrefana. Ary ny latitude izay fidintsika eo anelanelan'ny -8 sy -24, dia mbola manimba hatrany ny maha-eo ambanin'ny ekoatera azy ireo.
Asehontsika ihany koa hoe ahoana no fomba hizarantsika azy; Ny endriny manontolo dia 18 (3 Spindle of degrees 6) amin'ny longitude ary 16 (in-2 degre 8) amin'ny latitude. Asehonay fa mino anay ianao taila fa tsy tsipika tsotra. Ary eo no ananantsika ireo faritra telo, araka ny voalaza etsy ambony ao amin'ny Google Earth ,. Mba hitsapana azy dia tsindrio havanana ny sosona ary ampitao amin'ny kml, mahatonga ny lafiny fahitana ho lojika ka tao amin'ny laboratoara geodesy 20 taona lasa izay dia sarotra ny mahatakatra.
2. Sarintany 1: 250,000
Ohatra, handeha hiasa amin'ny faritra 20 amin'ny fomba mitovy isika. Amin'ity tranga ity, ny takelaka 1: 250,000 dia manana refy 1.5 x 1 degre, mitovy amin'ny fizarana ny faritra iray manontolo amin'ny matrix 16 x 4 taila.
Asehontsika fa amin'izao fotoana izao, isika dia mila ny rastera izay eo anelanelan'ny 60 sy 66 lamosina, ary latitude from 8 to 24; izay midika fa ny fizarana 6 dia ho zaraina amin'ny sehatra 1.5 ary ny latitudes mankany segondra 1.
Vita: hijerena, tsindrio havanana ary fanondranana amin'ny kml. Amin'ny fijerena lat / lava dia azonao atao ny manamarina raha mifanitsy amin'ny tsipika Google Earth ny tsipika.
Mba hanampiana ny centroids, voafantina ny taila rehetra, ary ampiharina ny fiasa geo, toy ny hita amin'ity sary manaraka ity. Tsy ilaina ny manamboatra sosona hafa, satria Manifold dia manohana karazana zavatra isan-karazany ao anatiny, raha te handefa amin'ny hafa ianao dia tsy tokony hofidinao akory satria noforonina tamin'ny alàlan'ny fifantenana izy ireo hany ka cut / paste.
3. Sarintany 1: 100,000
Amin'ity tranga ity, tsy misy fiovana mihoatra noho ny elanelana, ny fizarana 1.5 dia ampahany telo, izany no mahatonga azy ireo ho 0.50 x 0.50.
4. Sarintany 1: 50,000
Mandeha tsy miteny izany fa ny sosona manaraka dia mizara ho 0.25 x 0.166667, satria nozaraintsika ho matrix 2 x 3, araka ny hita amin'ny valiny farany. Eo ankavanana dia aseho ireo sosona, ao anaty fampirimana iray ary eo ambanin'izy ireo ao anaty sarintany, toy ny tahaka ny nanazavantsika azy andro vitsivitsy.
Ary toy izao izany no mety ho ao amin'ny Google Earth, azonay atao izany amin'ny fotoana iray, miaraka amin'ny faritra manontolo, na izany aza dia tsy mety izany satria mila mila manova azy ireo any amin'ny UTM izahay ary izany dia atao amin'ny sasantsasany voasaraka amin'ny faritra.
Mampihomehy fa ny rakitra Manifold .map izay misy ny sanda rehetra, ny fepetra 85 kb sy Google Earth 59 kb.
Azonao atao ny maka ny rakitra ao .map format ho an'ny GIS samihafa sy .kmz ho an'ny Google Earth.
Farany, ny fanaovana an'io tsy misy ny Google Earth dia nitaky fotoana bebe kokoa amin'ny fanaraha-maso abstract sy fisalasalana momba ny lesoka mety hitranga. Sarin'i Google Tsy ho araka ny marina izy ireo, fa toy ny fitaovana fampiasana fitaovam-pampianarana izany dia mety ho tena mahasoa, araka ny habetsaky ny fahaiza-manaony no nandray ny sehatra mahazatra ho ambany noho ny biraon'ny birao.
Previous Post«Previous UTM dia mandrindra ny sarintany google
Next Post Ampidiro ny sary sy modelin'i 3D avy amin'ny Google Earthmanaraka »
19 Valiny amin'ny "Google Earth; fanampiana an-tsary ho an'ireo mpanao sary "
Orlando hoy izy:
Manana fahabangan-toerana ho an'ny mpaka sary ve ianao?
Mieritreritra aho hoe inona no tadiavinao hatao amin'i PlexEarth, tohizo izy io, azo antoka fa mamaha anao ary mihazakazaka amin'ny AutoCAD
Shirley hoy izy:
Te-hampiditra sary avy amin'ny tany google amin'ny autocad aho satria ny autocad dia manana ny fari-pahaizan'ny sehatra maromaro saingy te-hamaritra ny endriky ny tany aho fa tsy hoe maninona no manome ahy ny sary mba ahafahako mitaona azy io, tsy fantatro raha azonao atao ve ny manampy ahy
Ny andiany farany indrindra amin'ny Google Earth dia ny fahaverezan'ity rohy ity:
Safidy hafa dia avy amin'ny Google Earth, mandehana any amin'ny safidy "fanampiana, avereno ny fanavaozana", jereo raha misy dikan-tsarimihetsika vaovao raha oharina amin'ilay efa anananao ary mandoa vaovao raha hanapa-kevitra.
Mino aho fa raha manao izany i Manifold dia tokony ho afaka hanao izany ny ArcGIS. Na dia tsy mbola nanao ilay rindrambaiko ESRI aza aho.
agent g!, efa nametraka ny version of google eart 6.5 aho, izay pejy afaka mandefa ny vaovao farany?,
Ilaina ihany koa raha mila mampiasa fantsom-pifandraisana ho an'ny fanondranana ny sosona na sary tsirairay ianao ary mampiasa azy, afaka miasa amin'ny rindrambaiko hafa toa an'i Arcgis ve ianao?
Diso, tsy heveriko fa misy ny dingana amin'io.
Tsy maintsy mandeha any amin'ny fitsarana ianao.
ariel boat hoy izy:
Misaotra tanteraka, azonao atao ve ny manoro lesona iray mba hanaovana izany dia seho anaty metatra toradroa
Antoka. Amin'izany dia tsy maintsy manana ny sary miaraka amin'ny projection UTM ianao, dia hiseho amin'ny safidin'ny fametrahana tsangana amin'ny metatra ny tontonana grid.
Marina ny hadisoako, nataoko fa ratsy ny misaotra anao.
Misy fomba iray ahafahanao manao izany amin'ny fepetra marina, izany hoe Xmumx metatra tora-droa, ohatra, izay rindrina na kilaometatra metatra metatra 100.
Nosoratako ireo rakitra samihafa, mba hahafahana mandefa azy ireo.
Marina izany, mamorona sary marika ianao ary apetanao amin'ny doka avo roa heny.
Avy eo dia manohy ny diako ianao.
Andramo ny fahasamihafana amin'ny fampiasana azy:
Hizaha / graticle
Ny iray amin'ireo dia tokony hiasa tsara ho anao.
Miarahaba, tsara izany, saingy raha ny marina dia tsy tonga ara-dalàna izy io, angamba satria satria ny lisitra milaza ny DEGREE aorian'ny fanosehana ny tsena dia tsy mivoaka; Mivoaka amin'ny alalana izy hametraka ary tsy safidy DEGREE fa mety izany? Misaotra anao
Misaotra betsaka noho ny valin-teninao haingana, fanontaniana iray hafa alohan'ny hamoahana ny seha-pamokarana hanoratana sy hanaovana izany? na misy fomba hafa.
Ao amin'ny Google Earth Nandalo ilay poety totozy teo amin'ny efijery ianao ary eto ambany dia hoentina any amin'ny latitude sy ny longitude. Raha tsy hitanao ilay izy, dia marefo, averina amin'ny fanaovana «view / status bar»
Tsara toy ny làlan-dàlana sy latitude eto ambonin'ny tany, amin'ity ohatra ity dia mahazo fitsipika hafa aho raha toa ka mampiasa tsara ny Google Earth aho.
Misaotra anareo ary manenina raha ny fanontaniana dia ny medaly goavam-be ankapobeny miaraka amin'ity
Novidina izy io, ny dikan-teny manokana dia mandeha $ 245.
Tsara ny nitadiavako saingy aiza no nandefasako ny GIS Manifold?
Oslu hoy izy:
fiarahabana h! Misaotra betsaka noho ny fanampiana aho ankehitriny, afaka manana rafitra fanehoana an-tsary avy amin'ny Google Earth aloha aho, miaraka amin'ny fanontaniana maro kokoa.